Iyini iCriminology | Ukwakheka kanye nezifundo
UMaria Jose Roldan | 14/01/2022 12:19 | Ukuziqeqesha
Uma ubulokhu ukhangwa ukuziphatha komuntu noma ukuthi kungani kwenziwa izenzo ezithile zobugebengu nezingekho emthethweni, Akungabazeki ukuthi umsebenzi weCriminology uwulungele wena. Lesi sihloko sijabulisa ngempela futhi sizokunikeza uchungechunge lolwazi ongaluhumushela ngokwenza.
Esihlokweni esilandelayo sizokutshela okuningi mayelana nomsebenzi weCrimonology kanye yamathuba emisebenzi ahlukene eliwanikezayo.
1 umsebenzi wezobugebengu
2 Yiziphi izimfanelo okufanele umuntu ofundela ubugebengu abe nazo?
3 Ungawufinyelela kanjani umsebenzi wezobugebengu
4 Amathuba emisebenzi yomsebenzi weCriminology
5 Ungazi kanjani ukuthi iCriminology ingumsebenzi ofanele
I-Criminology isiyalo esizocubungula kahle umenzi wobugebengu kanye nezenzo zakhe zobugebengu, ukuze kutholwe lezo zimbangela eziholele lowo muntu ekwenzeni izenzo ezinjalo ezingekho emthethweni. I-Criminology ibalulekile futhi ibalulekile emphakathini, njengoba inhloso yabo iwukunciphisa ubugebengu futhi ukwazi ukuphila kubo ngaphansi kwemikhuba namagugu omphakathi amaningi kakhulu.
Ezikhathini eziningi, isiyalo sobugebengu sivame ukudidaniswa nesobugebengu.. Ngayinye inezici zayo futhi iwukuthi nakuba isayensi yobugebengu iphethe umkhakha wesayensi wesenzo sobugebengu, ubugebengu bugxile emkhakheni wobugebengu obungokwengqondo nezenhlalakahle. I-Criminology izama ukuqonda umqondo wobugebengu ngaso sonke isikhathi nokuthi wawungaqala kanjani. Ngaphandle kwalokhu, iphinde ifunde ngomthelela onawo emphakathini.
Yiziphi izimfanelo okufanele umuntu ofundela ubugebengu abe nazo?
Umsebenzi wezobugebengu uhambisana ngokuphelele nalowo woMthetho, yingakho kulindeleke ukuthi umuntu onquma ukukhetha umsebenzi onjalo abe nentshisekelo ephelele ezimisweni zokuziphatha kanye nobulungiswa. Ngaphandle kwalokhu, umuntu okukhulunywa ngaye kufanele abe nekhono elithile lokukwazi ukuhlobana ngoba ngale ndlela kuzoba lula kakhulu ukuqonda ukuziphatha okuthile okungafanele. Ukwazi ukuthola izinto futhi wenze izahlulelo ezihlukene ngokusekelwe emaqinisweni, Kungenye yezimfanelo umuntu onquma ukufundela ubugebengu okufanele abe nazo.
Ungawufinyelela kanjani umsebenzi wezobugebengu
Uma umuntu ekhetha lolu hlobo lomsebenzi wasenyuvesi, kwanele ukuthi abe neziqu zeBachelor noma abe neziqu eziphakeme ze-FP ukuze abhalise kuyo. Iziqu zobugebengu zithatha iminyaka emine futhi kuyo, izifundo ezihlobene nengqondo yobugebengu, izindlela zesayensi noma amalungelo abantu kanye namanani afundwayo.
Amathuba emisebenzi yomsebenzi weCriminology
Njengamanje, umsebenzi weCriminology uvumela umuntu owenzayo ukuthi akwazi ukuthola umsebenzi ngaphandle kwezinkinga eziningi. Ikakhulukazi, Izazi zobugebengu zivame ukusebenza kwezobulungiswa noma ezikhungweni zokuphepha ezifana namajele. Kuzo ngokuvamile benza imisebenzi eyahlukene njengokubambisana ekuphenyweni okuthile kobugebengu noma ukwenza izifundo ezithile ngobugebengu.
Kwezinye izimo, ngokuvamile basebenza ndawonye nezingcweti zezenzo zobugebengu ukuze baxazulule uphenyo oluthile lobugebengu. Bangase futhi bakhethe ukukhonza izisulu zobugebengu obuhlukahlukene kanye banikeze lonke usizo olungase lube khona kubo.
Ungazi kanjani ukuthi iCriminology ingumsebenzi ofanele
Kungaba umsebenzi ofanele uma uthanda yonke into ehlobene nobugebengu nezenzo zobugebengu. Iphelele kuwe, uyakujabulela ukuphenya ukuthi yini eholela umuntu ekwenzeni isenzo esingekho emthethweni. Ngaphandle kwalokhu, elinye lamaphuzu avuna umsebenzi weCriminology kungenxa yokuthi unamathuba amahle kakhulu emisebenzi.
Khumbula ukuthi isiyalo esinendima ebaluleke kakhulu emphakathini, njengoba sibonga isibalo esikhulu sobugebengu kanye nezisulu ezivinjelwayo. Isazi sobugebengu siphethe ukucwaninga ngesibalo sesigebengu kanye nokudala izifundo ezehlukene ezisiza ukubuyisela isigebengu esishiwo ngenhla emphakathini.
Ngamafuphi, umsebenzi weCriminology ungenye yezinto ezithakazelisa kakhulu kulo lonke i-panorama yezemfundo. Iqhaza ekulo emphakathini libaluleke kakhulu futhi lokhu kwenza ikhange kakhulu kubantu abaningi. Kuyisiyalo esifanelekile salabo bantu abanentshisekelo enkulu endleleni ukuziphatha komuntu okwenziwa ngayo, ikakhulukazi lapho benza izenzo ezithile ezingekho emthethweni noma zobugebengu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Ukuziqeqesha » Iyini i-Criminology?